अफगानिस्तानबाट छुट्टीमा आएका अन्योलमा :: :: Setopati
अफगानिस्तानबाट छुट्टीमा आएका अन्योलमा
नवलपरासी बर्दघाट नगरपालिका ९ भुताहामा रहेको घरमा एक महिनाअघि अफगानिस्तानबाट छुट्टीमा आएका मानबहादुर थापालाई छिमेकी दिदीले भनिन्, ‘त्यस्तो देशमा किन जानुहुन्छ बाबु नजानुस् भो। सकभर नेपालमै बसेर इलम गर्नुस्, नभए अर्को कुनै देश जानुस्।’
छिमेकी दिदी मात्र होइन घर, परिवार र आफन्तले पनि मानबहादुरलाई अफगानिस्तान नजान भनेका छन् । तर उनी मानेका छैनन् । उनी सधै एउटै नहुने र यो भन्दा पहिले त्यस्तो घटना नभएको भन्दै जाने सुरमा छन्, आजको अन्नपूर्णमा खबर छापिएको छ।
उनी आफन्त भेटघाटमा व्यस्त छन् । छुट्टी सकिन लागेकोले आफन्तको भेटघाटमा उनी व्यस्त छन्।
अफगानिस्तानमा ठूलो घटना भयो अब फेरि पनि जानुहुन्छ ? भन्ने जिज्ञासमा उनले भने, ‘सधै कहाँ त्यस्तो हुन्छ र ? घटनालाई अकल्पनीय र विभत्स भन्दै उनले भने मारिने सवै मेरै कम्पनीमा काम गर्ने साथी हुन् । सायद त्यहाँ भएको भए म पनि मारिन्थे होला।’
अफगानिस्तानमा भएको हमलापछि नेपाल सरकारले प्रतिवन्ध लगाएका कारण मानबहादुरलाई जान पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नेमा अन्योल छ। नयाँ रोजगारीलाई प्रतिवन्ध लगाए पनि छुट्टीमा आएकाहरुका लागि भने फेरि र्फकने वातावरण मिलाउन नेपाल सरकारले अफगानी सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने मानबहादुरको माग छ।
प्रकाशित मिति: 2016-06-25 06:38:01